UK remove Zimbabwe from the COVID-19 red list - Mbare Times
UK remove Zimbabwe from the COVID-19 red list
UK remove Zimbabwe from the COVID-19 red list. Zimbabwe is among a total of 47 of the 54-strong list now categorized up to the “rest of world” list. UK’s red list classification had put the destination in a disadvantaged position as the United Kingdom is one of Zimbabwe’s major source tourism markets.
Zimbabwe will be removed from the United Kingdom’s COVID-19 Red List, effective from 4 am on 11 October. It also affected the participation of UK-based Warriors players in the ongoing 2022 World Cup qualifiers.
Being on the red list enforces strict travel regulations and means people arriving in the UK from Zimbabwe must quarantine for ten days in a government-designated hotel near the airport, at their own cost of more than £2 000.
The UK government made the announcement on Thursday saying the move was triggered by progress on vaccination globally. Read in part the government statement:
The development is positive news for Zimbabwe, especially the tourism sector which is still recovering from the effects of the coronavirus pandemic.
Related Topics:2022 World Cup qualifierscoronavirus pandemicCOVID-19 red listUKUK Health Security AgencyUK-based Warriors players
The stealing of COVID-19 vaccination cards points to underlying issues in Health Sector
Blow for Warriors as Injury knocks out French-based striker
Update: UK set to deport 150 Zimbabweans
5 000 school girls impregnated in Jan and Feb alone
English Premier League57 mins ago